Wakiilka Mesut Ozil Oo Wadahadal Kula Jira Barcelona Isagoo Ku Wargeliyay Qiimaha Dalabka Ozil Ee Ay Arsenal Aqbali Doonto Bisha Janaayo - Laacib.net
Wakiilka Mesut Ozil Oo Wadahadal Kula Jira Barcelona Isagoo Ku Wargeliyay Qiimaha Dalabka Ozil Ee Ay Arsenal Aqbali Doonto Bisha Janaayo
Wakiilka Mesut Ozil ayaa lagu waramayaa inuu wadahadalo kula jiro Barcelona, waxaana uu u sheegay in Arsenal ay aqbali doonto dalab 20 milyan ginni ah bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
Jariirada Mundo Deportivo ayaa sheegeysa in wakiilka Ozil oo la yiraahdo Dr Erkut Sogut inuu durbaba wadahadal kala yeelanayo kooxda Catalans sidii uu Ozil waqtiga qaboobaha ugu wareegi lahaa Nou Camp.
Waxaa la sheegayaa in Ozil uu daneynayo inuu ku biiro Barcelona, laakiin waxa uu doonayaa inuu dalab ka helo sida ugu dhakhsiyaha badan.
Waxaa sidoo kale jira lix kooxood kale oo xiiseynaya kubadsameeyaha xulka qaranka Jarmalka.
Warbixinta wargeyska Mundo Deportivo ayaa sidoo kale lagu xusay in Arsenal ay iyaduba daneyneyso inay iska iibiso bisha Janaayo madaama ay doonayaan inay lacag ku helaan xiddigaan bedelkii uu si bilaash ah uga tagi lahaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
Dr Sogut ayaa lagu waramayaa inuu sidoo kale u sheegay Barcelona in Ozil uu jeclaan lahaa qandaraas ku eg 2020, inkastoo aan la helin dalabka mushaharkiisa waxa uu yahay.
Inkastoo uu xiiso ka helayo dhan walba, kooxda tababare Ernesto Valverde ayaa la aaminsan yahay inay ugu horeyso tartankiisa, iyadoo Ozil uu niyada gashaday inuu u wareegayo Barcelona madaama uu ku hungoobay inuu kooxda ku biiro 2010 markii uu tababare ka ahaa Pep Guardiola.
Waxaa sidoo kale faa’ido dheeri u ah inuu afka hore kala ciyaaro Lionel Messi iyo weliba Luis Suarez.